Urur Siyaasadeedyada Puntland oo dalbaday in dib loo dhigo doorashooyinka Qof iyo Codka… - Bulsho News
Urur Siyaasadeedyada Puntland oo dalbaday in dib loo dhigo doorashooyinka Qof iyo Codka…
Urur-siyaasadeedyada Puntland ayaa Madaxweyne Deni iyo Guddiga Doorashooyinka Puntland ka dalbaday in dib loo dhigo doorashada qof iyo codka ah ee dowladaha hoose ee la qorsheeyey in ay ka dhacaan 25-ka October degmooyinka;Qardho, Eyl iyo Ufayn.
Dalabka dib u dhigidda Doorashooyinka qof iyo codka ayay ku sheegeen lagu guda jiro doorashooyinka Soomaaliya ee heer Qaran, muhiimna ay tahay in kala duwo doorashada heer Federaal iyo tan Golayaasha degmooyinka Puntland.
Sidoo kale Urur siyaasadeedyada ayaa dalbaday in dib-u-eegis lagu sameeyo habka doorashada oo ah ‘Hannaanka liistada xidhan’ kaasi oo dadweynuhu ay urur u codaynayaan halkii ay qof u codayn lahaayeen.
Ilaa hada majiro wax jawaab ah oo kasoo baxay Guddiga Doorashooyinka kumeelgaarka ah ee Puntland oo kusaabsan dalabka urur siyaasadeedyadan.
Laftagareen oo ka hadlay khilaafka Farmaajo & Rooble
Gen. Biixi Oo Sheegay In Lasoo Afjaray Dagaalkii...
Balcad: Dad saarnaa Bas oo ku geeriyooday Qarax...
Which countries are enforcing mandatory Covid jabs –...
We don’t live in isolation. Our ancestors’ trauma...
Afghanistan: Taalibaan oo ka hadashay Khilaafka dhex bilaabmay...
Madaxweynaha Jubaland Oo La Kulmay Qoyska Pro. Gaandi...
Boosaaso: Ciidamada Booliska Oo Gubay Dhalooyin Khamri ah
Madaxweyne Deni oo abaalmarin gudoonsiiyey Saraakiisha Amniga Mudug
Xaamid Mir: Sheekadii saxafi Pakistan u dhashay oo...
Wararkii ugu dmabeeyey ee xaaladda dhalinyaradii loo afduubtay...
Daawo: Majaajiliistaha caanka ah ee Basadiir oo lagu...
Laacibiinta caalamka: Tobanka ciyaartooy ee ugu wanaagsan xilli...
PUNTLAND oo war cusub kasoo saartay shirka madax...